Shirkadda Apple iyo FBI oo muran amniga IPHONE ka dhextaagan yahay - Haldoornews | Haldoornews
Shirkadda Apple iyo FBI oo muran amniga IPHONE ka dhextaagan yahay
February 18, 2016 - Written by admin
Agaasimaha guud ee shirkadda Apple Tim Cook ayaa sheegay in khatar weyn ku tahay shirkadda Apple haddii ay dhisaan albaab danbe oo laga soo geli karo barnaamijkooda uu ku shaqeeyoiOS ee uu ku shaqeeyo IPHONE.
Maalintii shalay ee Salaasada ayaa Tim Cook shaaciyey warqad dheer oo uu u direy macaamiisha shirkadda, taas oo uu ku sharxaayo sababta Apple ay uga hortimid dalabka hay’adda FBI ee ah in ay u dhacaan oo furaan telefon IPHONE ah oo uu iskalahaa mid kamid ah labadii qof ee weerarka ka geystey gobolka Calafornia magaalada San Bernardino.
Tim Hook ayaa sheegaya in dalabka FBI uu ka badan yahay keliya hal telefoon oo la furo.
“…Waxay na weydiisteen in aan u dhisno albaab danbe oo uu lee yahay IPHONE, kaas oo sahlaya marka recorvery lagu samaynaayo IPHONE, isla markaana xagga danbe looga soo dhici karo, marka ay timaado xaalad baaritaan, barnaamijkaas oo ah mid aan hadda jirin…”
Tim Hook ayaa sheegay in ay la shaqeeyeen FBI marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino, khubarona ku tageereen, laakiin waxa FBI raadineyso uu yahay mid si weyn khatar ugu ah shirkadda.
Telefoonka IPHONE waxaa ku dhisan barnaamij haddii 10 jeer la geleiyo Password khaldan in uu istir-tiraayo oo dhamaan xogta ku jirtey ay meesha ka baxayso, taasoo FBI ay dooneyso in shirkadda Appale ay bedesho
Sida ay qoreen qaar kamid ah warbaahinta dalka Maraykanka FBI ayey u suurta geli weydey in ay furaan telefonka Syed Rizwan Farook oo isaga yo xaskiisa ay weerar ku qaadeen xaflad ka socotey magaalada San Bernardino.
Hay’adda FBI ayaa si weyn u dhibsatey barnaamijka u danbeeyey ee iOS lagu dhisey IPHONE oo leh Encryption adag oo aanlagu sameyn karin bypass, si loo ilaaliyo qofka isticmaalaya xogtiisa, taas oo ay hadda doonayaan in ay wax ka bedalaan
Copyright 2021 Haldoor News ®All rights reserved.